လော ရှည် - က တဲ့ ပွဲ: UMDH ဖြင့် မှတ်ဥာဏ်ယိုပေါက်များကို ရှာဖွေခြင်း
Posted by Law Shay at 2:31 AM
java မှာ အဓိက အဲဒီ ပြဿနာကို ဖြေရှင်းပေးထားတယ် ဖတ်မိဘူးတယ်ဗျ။ ဟုတ်ပါသလားဗျို့
ဒါဆို C# မှာ ရောခင်ဗျ။ ကျွန်တော်က စသုံးမလို့ စဉ်းစားနေပါတယ်။ C++ ကိုသုံးတုန်းက pointer နဲ့ array တွေ dynamic memory handling တွေမှာ အဆင်သိပ်မပြေတာကို သတိထားမိခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အခု ပရောဂျက်တွေကို မက်လက်ဘ် ကနေ ပြောင်းရေးရင် C# နဲ့ လုပ်မလားစဉ်းစားနေမိတာပါ။ အကြံပေးစေချင်ပါတယ်ဗျာ။
If you gonna use features that are only available in C/C++, then you shouldn't move to other. However, if you don't, you can use any language. But for performance/power issues (and some embedded systems), C/C++ is still the best. Since you can bear the performance of mathlab, java is stillagood choise (that'sawild guess)